New Russian 3D Technology for the Fashion Industry - Communal News: Online Business, Wholesale & B2B Marketplace News
फेसन उद्योगको लागि नयाँ रूसी थ्रीडी टेक्नोलोजी
नोभेम्बर 28, 2020 नोभेम्बर 28, 2020 क्रिस्टिना किटोवा एशिया, चीन, चीन फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, चीन थोक र B2B, विशेष समाचार, gigs, ग्लोबल विश्व, समाचार लेख, रूस, रूस फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग्स, रूस थोक र B2B
फेसन उद्योग बजार शेयर%% छ र २०२० मा उद्योग बजार मूल्य $ १.4 ट्रिलियन पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
नयाँ थ्रीडी प्रिन्टि technology टेक्नोलोजीले पोलीरेथेन कपडा प्रिन्ट गर्न प्रयोग गरिरहेको छ।
भविष्यमा एक ग्राहकले घरमा थ्रीडी प्रिन्ट गर्न सक्षम हुनेछ।
बाट रूसी वैज्ञानिकहरु एक कोसिजिन राज्य विश्वविद्यालय नयाँ क्रान्तिकारी थ्रीडी प्रिन्टिंग टेक्नोलोजी विकास गर्नुहोस् जुन फेसन उद्योगको लागि विशेष गरी तयार छ। ए.एन. कोसिगिन मस्को स्टेट टेक्सटाइल विश्वविद्यालय १3१ Moscow मा मस्को स्टेट टेक्सटाइल इन्स्टिच्यूटको रूपमा गठन गरिएको थियो। यो रूसमा कपडामा उच्च शिक्षाको लागि सब भन्दा पुरानो संस्थान हो।
एक कोसिजिन राज्य विश्वविद्यालय परियोजना प्रदर्शन।
परियोजना रूसी ईन्जिनियरि and र नवीनता अनुदान को रूपमा वित्त पोषित थियो। विश्वव्यापी फेसन उद्योगको तथ्या .्कका अनुसार, फेसन उद्योगको बजार शेयर%% छ र २०२० मा उद्योग बजार मूल्य १. tr ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यसबाहेक, नयाँ थ्रीडी प्रिन्टि technology टेक्नोलोजीले पोलीरेथेन कपडा प्रिन्ट गर्न प्रयोग गरिरहेको छ। Polyurethane कार्बेट इकाइहरूले बनेको एक बहुलक हो carbamate लिंक द्वारा सामेल।
धेरै जसो पोलीरेथेन्स थर्मोसेटिंग पॉलिमर हुन् जुन पग्लिँदा पग्लदैनन्, थर्माप्लास्टिक पालीयुरेथेन्स पनि उपलब्ध हुन्छन्।
यद्यपि, मा polyurethane शुद्ध फारम बच्चाहरूलाई श्वसन समस्या र विषाक्त हुन सक्छ। जे होस्, नयाँ प्रविधि र भौतिक अनुप्रयोग आगामी वर्षको ट्रेड शोमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जारी सूचना अनुसार वैज्ञानिकहरूले एफडीएम थ्रीडी प्रिन्टि technology टेक्नोलोजी प्रयोग गरे। Fused Filament Fabrication (FFF), ट्रेडमार्क टर्म फ्यूज डिपोजिशन मोडेलिंग अन्तर्गत पनि चिनिन्छ (FDM), कहिलेकाँही फिलामेन्ट फ्रीफॉर्म बनावट पनि भनिन्छ, एक थ्रीडी प्रिन्टिंग प्रक्रिया हो जसले एक थर्मोप्लास्टिक सामग्रीको अविरल फाइलेमेन्ट प्रयोग गर्दछ। प्रिन्ट हेड कम्प्युटर नियन्त्रण अन्तर्गत सारिएको छ मुद्रित आकार परिभाषित गर्न को लागी।
यसबाहेक, नयाँ टेक्नोलोजीले पॉलीयुरेथेन पिघल गर्दछ र यसले डिजाइन गरिएको उत्पाद बनाउँछ। पहिले, यो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर व्यक्तिगत फाइबरबाट बुनेको कपडा पाउन सम्भव छैन, साधारण कपडाजस्तै। पग्लिएको अवस्थामा पॉलीयुरेथेनको लागि गुणहरूले पोलीमर थ्रेडहरूलाई एकसाथ रहन अनुमति दिन्छ।
यस चुनौतीलाई FDM थ्रीडीको सट्टा 3D लेजर प्रिन्टि technology टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर बाइपास गर्न सकिन्छ। जे होस्, थ्रीडी लेजर टेक्नोलोजी बढी महँगो छ र यसले तैयार उत्पादनहरूको मार्जिन परिवर्तन गर्दछ। प्राप्त कपडाहरूको नमूनाहरू कपडासँग तुलना गर्न सकिन्छ जुन फेसन उद्योगले प्रयोग गर्दछ।
नयाँ सामग्रीसँग प्रत्येक विशेषता छ, कठोरता, लचिलोपन र एक्स्टेन्सिबिलिटी सहित। विकासकर्ताहरूले लागत तुलना गरे र FDM को उपयोग गर्न लागत $ ०.0.92 c सेन्ट छ र १० सेमी X १० सेमी फैब्रिक नमूनाको लागि थ्रीडी लेजर $ of$ को उपयोग। यद्यपि भविष्यमा अर्डर खण्डहरू बढाउँदै मूल्य घटाउन यो व्यावहारिक छ।
थ्रीडी मुद्रित कपडा
समग्रमा, यस प्रविधिको मुख्य फाइदाहरूमध्ये एउटा घरेलू उत्पादन हो। तसर्थ, चीनबाट निर्माण निर्माण। तसर्थ, मध्यम वर्गका रोजगारहरू पश्चिममा फर्काउने र राम्रो गुण नियन्त्रणको लागि।
थप रूपमा, नक्कली उत्पादन र सम्भावित विषाक्त सामग्रीको प्रयोगका कारण चीनलाई विश्वास गर्न सकिदैन। यो पनि फेसन उद्योग मा रसद परिवर्तन गर्न सक्दछ।
स्पष्ट रूपमा, प्रविधि लक्जरी ब्रान्डका लागि उपयुक्त छैन, तर निर्माण खेल सामग्री र उत्पादनहरू र विभिन्न प्रकारका कपडाहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, निकट भविष्यमा घरमा पनि डिजाइनर कपडा प्रिन्ट गर्ने सम्भावना हुनेछ। थ्रीडी प्रिन्टि technology टेक्नोलोजी विकसित हुन जारी छ।
कोरोनाभाइरस महामारीले किनमेलको बान्की परिवर्तन गरेको छ र घरबाट कपडाको सामानको प्रिन्टि far अबदेखि टाढाको रूपमा लिन सकिने छैन।
3D मुद्रण वस्त्र सांप्रदायिक समाचार कोभिड 19 फेशन रूस प्रविधि
२ विचार "फेसन उद्योगको लागि नयाँ रूसी थ्रीडी टेक्नोलोजी" लाई
नोभेम्बर 28, 20203मा: 56 बजे
मलाई यो मन पर्यो! धेरै रमाइलो। म कल्पना गर्न सक्छु कि मेरा छोरीहरू र बुहारीहरू ड्राफ्टि table टेबलको वरिपरि जम्मा भएका छन् किनकि प्रिन्टर टाढा काम गर्दै छ, कोर्सको बाहिर बाट। तिनीहरू सबै प्राविधिक जानकार छन् र धेरै रचनात्मक छन्। यो सिलाई मौरीको सट्टामा नयाँ प्रिन्टि be माहुरी हुनेछ। थाहा छैन यी रचनाहरू कत्ति आरामदायक हुनेछन्, तर विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि धेरै रमाईलो। हाम्रो परिवारको केहि पहिल्यै D डी प्रिन्टरमा आईटमहरू उत्पादन गर्दछ। मैले यसलाई कम्तिमा पनि सामानको लागि धेरै राम्रोसँग कार्य गरिरहेको देखेको थिएँ।
नोभेम्बर 29, 20202मा: 02 बजे
धेरै राम्रो, हो म यो हेर्न सक्दछु कति रमाईलो र रोचक हुन सक्छ। मलाई लक्जरी आईटमहरूको बारेमा थाहा छैन तर मलाई लाग्छ एक किसिमको र साँच्चै राम्रो चीजहरू गर्न सकिन्छ, तपाईं सही हुनुहुन्छ यो सामान बजारको लागि उत्तम हुन्छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावी कलेजले बिडेनलाई बिजेता घोषित गरे भने उनी अफिस छोड्ने छन्